Ukulawula ama-valve -
Izibani ze-UV ze-UV zokuhlanzwa kwamanzi
AMAQHINGA OKUQHUTYWA - SINGER
ISIQINISEKISO SOKULAWULA - ISIBONELO SEVALIVU YOKUTHUTHUKISA
I-valve yokunciphisa ingcindezi ilungele ukugcina ingcindezi ngqo ngaphansi kwe-valve. I-valve isabela ekucindezelweni kwesistimu kwehle ngokuxhuma endaweni yokuphuma i-valve nohlelo lomshayeli ophendula ushintsho oluncane ekucindezelweni futhi ulungisa isikhundla se-valve ngokumisa ingcindezi engenhla kwedijithali.
Igcina ingcindezi efanelekile ngaphansi kwe-valve
Usabela ngokushesha nangempumelelo
I-CONTROL VALVE - IMODLELO 106/206-PR-48 YOKUNCIPHA IVALVELE NGOKUDLULA OKUDLULA NGOKUDLULA
I-valve yokwehlisa ingcindezi yokudlula kwengcindezi yokugeleza okuncane i-valve yokwehlisa ingcindezi esebenza ngokubamba ngokufana, ilungele izinhlelo zokusebenza ezinomkhawulo wesikhala. Ngaphansi kwezimo zokugeleza okuphansi, i-valve esemqoka iyavala futhi imigwaqo ihlale ivulekile, ilawula ingcindezi yehle ngokugeleza okuyi-zero ngaphandle kokubanga ukuvevezela kwesihlalo.
Igcina ukugeleza okuzinzile kuye ku-zero
Ukulungiselelwa kwengcindezi enembile nangokuthembekile
Iphelele ekufakweni kwethambeka eliphezulu
4.8 / 5 ( 10 amavoti )
Bona eminye imikhiqizo:
Amapaki nezindawo zemidlalo
I-Waterpoint Copyright © 2020
Wonke Amalungelo Agodliwe
Ukuqamba kanye nokwenza umsebenzi: pixelsperfect.pl - amawebhusayithi Poznań